Mogadishu Journal » 2018 » December » 5
Mjournal :-Golaha Aqalka Sare ee Baarlamanka Federalka Soomaaliyeed ayaa maanta ansixiyay dhismaha Gudiga Madaxa banaan ee la dagaallanka Musuq maasuqa oo ay horey u soo ansixiyeen Golaha Shacabka. Xildhibaannada Golaha Aqalka sare oo maanta kalfadhigii 4aad kulankiisii 9aad, ku...
Mjournal :-Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ayaa goor dhow ansixiyay Hindise sharciyeedka xuquuqda Siyaasiyiinta dowladda oo muddooyinkii u dambeeyay ay ka doodayeen Xildhibaanada. Kulanka Xildhibaanada oo ay soo xaadireen 170 Mudane ayaa waxaa shir guddoominayay...
Mjournal :-Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay Safiirka cusub ee Soomaaliya u magacawday dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo maalin ka hor gaaray magaalada Nairobi ayaa dhowaan loo magacaabay Safiirka...
Mjournal :-Masuuliyiin ol’olaha doorashada u qaabil sanaa xisbiga Jamhuuriga ayaa email-ladooda la jabsaday ka hor doorashadii xiliga dhexe ee dalka Maraykanka, sida hadda soo baxday. Guddiga xisbiga Jamhuuriga ee Congres-ka oo magaciisa loo soo gaabiyo NRCC ayaa sheegay in...
Mjournal :-Boqorka Sacuudi Carabiya Salmaan Bin Cabdulcasiis ayaa martiqaad u diray Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, si uu uga soo qeyb galo shirka Golaha Iskaashiga Khaliijka ee ka dhici doona magaalada Riyadh 9-ka bisha December. Sida ay shaacisay Wakaalada...
Mjournal :-Iyadoo 19-ka bishan lagu wado inay magaalada Baydhabo ka dhacdo doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed oo dhowr jeer oo hore dib u dhacday ayaa waxaa ka socda xaafadaha magaalada howlgallo lagu sugayo amniga magaalada. Labadii habeen ee la soo dhaafay ayaa waxaa...
Mjournal :-Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka cusub ee Turkiga u soo magacawday Soomaaliya Mehmet Yilmaz, kaasoo bedelay Safiirkii hore Olgen Bekar, kaddib markii ay u dhamaatay muddo xileedkiisa. Danjire Axmed...
Mjournal :-Senetarro maqam ku leh Koongareeska Mareykanka ayaa Talaadadi shalay sheegay in ay jiraan daliilo cad oo muujinaya in dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman uu ka danbeeyay dilki magaalada Istanbul loogu geystay wariye Jamal Kashikji. Mudanayaashaan...
Mjournal :-28 sano jir Soomaali ah ayaa waxaa lagu maxkamadeeyay Jaziirada Malta waxaana lagu soo oogay in uu ka dhaga adeegay awaamiirta Booliska uuna isku dayay in uu u gacan qaado balse Boolisku ay iska difaaceen sida lagu daabacay Wargeyska Malta today ee kasoo baxa...